ललितपुरको मतगणना स्थगित- समाचार - कान्तिपुर समाचार
ललितपुरको मतगणना स्थगित
काठमाडौं — ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. १५ को महेन्द्र आदर्श विद्यालय केन्द्रको मुचुल्काभन्दा बढी मत भेटिएपछि मतगणना स्थगित भएको छ ।
मतगणनामा २६ मत बढी भेटिएपछि पुन: मतगणना भएको हो । पुन: मतगणना हुँदा पनि ५ मत बढी भएपछि एमालेले विरोध गरेको थियो ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मतपत्रको अधकट्टी रुजु गरेर मतगणना गर्ने जानकारी दिएको छ ।
यसैबीच ललितपुरकै महालक्ष्मी नगरपालिकाको मतगणना दुई दिनदेखि रोकिएको छ ।
वडा नं. ६ मा तीन मतले कांग्रेस विजयी भएपछि माओवादी केन्द्रले अबरोध गरेको हो ।
प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७४ १४:३२
रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिकामा एमाले विजयी
रामेछाप — रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिकाको प्रमुखमा एमालेका प्रेमबहादुर तामाङ निर्वाचित भएका छन् । उनले ४ हजार ८ सय ७० मत पाएका थिए । उनका प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका वेदराज लामाले ३ हजार २ सय ४४ मत प्राप्त गरेका थिए ।
यसै गरी उपप्रमुखमा एमालेकै मखमली श्रेष्ठले विजय हासिल गरेकी छिन् । श्रेष्ठले ४ हजार ९ सय १६ मत पाएकी थिइन् । तामाङ एमालेका जिल्ला उपसभापति हुन् । लामो समयदेखि राजनीतिमा सम्लग्न रहेका तामाङ जनप्रतिनिधिको रुपमा चुनिएको यो पहिलो पटक हो । उपप्रमुख श्रेष्ठ भने काठमाडौं सम्पर्क मञ्चको राजनीतिमा सम्लग्न रहेकी थिइन् । उनी जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा पदाधिकारी समेत थिइन् ।